Ciidanka Soomaalida ee Tababarka loogu qaaday Eritrea oo ka dagaalamay Gobolka Tigray | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidanka Soomaalida ee Tababarka loogu qaaday Eritrea oo ka dagaalamay Gobolka Tigray
Ciidanka Soomaalida ee Tababarka loogu qaaday Eritrea oo ka dagaalamay Gobolka Tigray
Warbixin Khaas ah oo uu Baaraha Khaaska ee Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha soo saartay ayaa lagu bidhaamiyey inay Ciiddanka Soomaalida ee Tababarka loogu qaaday ku lug lahaayeen dagaalka horseeday geerida Kumanaan qof iyo Barakaca Tobanaan kun oo kale.
Warbixintaasi oo sumadeeda Tixraaca ahaa A/HRC/47/21 waxaa lagu xusay in Baaraha Khaaska ee QM soo gaareen Warbixin iyo Warar sheegayo in Ciiddanka Soomaalida ee Tababarka Milliteri laga qaaday Xeradii Tababarka, lana geeyey Jiidda hore ee Dagaalka ee Gobalka Tigrayga, waxayna Ciiddanka Soomaalida oo ay wehliyeen Milliteriga Eritrea ka gudbeen Xuduudka dalka Ethiopia.
Baaraha Khaaska ee Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha waxa kale oo uu Warbixintiisa ku xusay inuu hayo warar muujinayo inay Dagaalamayaasha Soomaalida xilli xaadirkan ku sugan yihiin daafaha magaalladda AKSUN ee Gobalka Tigrayga ee Waqooyiga Ethiopia.
Dowladda Federalka Somalia waxay horey u beenisay in Ciiddanka Tababarka loogu qaaday Eritrea ay ka qeyb qaateen Dagaalka ka socda Gobalka Tigrayga ee Ethiopia, iyadoo Guddiga Arrimaha Dibedda iyo Difaaca ee Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federalka ka codsadeen Madaxweynaha Somalia inuu faahfaahin ka bixiyey waayaha ay ku sugan yihiin Ciiddanka tababarka loogu qaaday Eritrea.
Baaraha Khaaska ee Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha waxaa lagu wargeliyey in Guddiga Arrimaha Dibedda iyo Difaaca ee Golaha Shacabka ee Barlamaanka Federalka ka dalbadeen Madaxweynaha Somalia in Guddi Xaqiiqo-raadin ah loo diro Caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, si ay u soo baaraan Xaalladda ay ku sugan yihiin Ciiddankii Tababarka loo qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, QM waxay ku baaqday in Baaritaan Madax-bannaan lagu sameeyey Tacadiyada, Weerarada, Bililqada iyo Kufsiga ka dhacay Xeryaha Qaxootiga ee Gobalka Tigrayga, oo lagu eedeeyo inay Ciiddamada Ethiopia iyo Eritrea geysteen muddadii u dhexeysay bishii November ee sanadkii hore ee 2020-kii ilaa bishii Janaayo ee sanadkan 2021-ka.
Maqaal horeCumar Filish oo dhagax dhigay Xarun Degmo oo dib u dhis lagu sameynayo
Maqaal XigaCiidanka Dowladda oo fuliyay howlgal qorsheysan oo ka dhan ah Al-shabaab